I-china i-260g i-FRONTLIT YOKUGQIBELA I-BANNER mveliso kunye nabenzi UShawei
I-260g IBHANGELE ELIQHELEKILEYO
Ikhowudi yomba: LB-F005
Igama: I-510g Frontlit Boated Banner
Umdibaniso: 18X18 1000DX1000D
Isicelo: Ibhokisi yokuKhanya engaphambili
I-PVC flex banner ekwabizwa ngokuba yi-mesh banner, i-lona, ​​i-tarpaulin, njl njl.Yilungele yonke inkqubo ye-inkjet esekwe kwisinyibilikisi. I-OSIGN PVC iflex banner inamandla amahle okulwa ne-microbial kunye nokuguga. Silawula elubala ukusuka kwi-5% ukuya kwi-10%, lukhetho olufanelekileyo lwebhodi yezaziso, kwaye lisetyenziswa kakhulu kwintengiso zangaphakathi okanye zangaphandle.
Inkxaso yenkxaso ye-inki: Umshicileli we-inkjet wesinyibilikisi, umshicileli we-inkjet we-eco-solvent, umshicileli we-UV inkjet
1.Ukumisa okukhawulezayo, i-inki yokunyanzeliswa kunye nokushicilela
2. Kucacile, kukhanya kunye nokukhuseleka, ukuhanjiswa kokukhanya kuhanjiswe kakuhle,
Iipropati 3.Good ngamanzi, engangenwa, dampproof, zingabi nalo kunye anti-bako, 5meters ifomathi enkulu.
4. Amandla aphezulu kunye nokuguquguquka ngaphakathi nangaphandle
5.Isebenza kwi-HP, Vutek, Scitex, Nur, DGI, Infinity, Flora, Roland, Mutoh, Mimaki njl.
Egqithileyo UKUQHUBA I-TEXILE-230G
Okulandelayo: ISITIKI ESIMHLOPHEYO ESIBALULEKILEYO
I-Pvc Flex Banner ebuyisiweyo
I-Frontlit PVC Flex Banner
I-220G BUYEKA UKUBHALA IBHAYIBHILE KWI-FILM
SOFT PVC BHANYA-250G
I-510G BACKLIT camera camera (2)
Amacala angama-440G aphindaphindwe kabini
I-460G ICANDELO LOKUQHUBA OKUPHAKATHI KWI-FLEX BANNER
Amacala aphindwe kabini aprintiweyo ngocingo